Mọnde 15 Febrụwarị 2021
Ntinye Ọkụ Site n'ike bougainvillea, ifuru nke Pingtung County, Linear Flora sitere n'ike mmụọ nsọ. Ewezuga ahihia bougainvillea atọ a hụrụ n'okpuru nka, a nwere ike ịhụ ọdịiche na ọtụtụ atọ n'ụzọ dị iche iche. Iji mee mmemme ncheta ụbọchị iri atọ nke Taiwan, a na-akpọ onye na-ese ihe ọkụ Light Teng Pai site na Ngalaba Omenala nke Pingtung County ka ọ mepụta oriọna na-enweghị atụ, ngwakọta pụrụ iche nke ụdị na teknụzụ, na-ezipụ ozi nke ịgbanwe ihe nketa nke ememme ahụ. na ijikọ ya na ọdịnihu.
Mbọsị Ụka 14 Febrụwarị 2021
Satọdee 13 Febrụwarị 2021
Fraịdee 12 Febrụwarị 2021
Tọọzdee 11 Febrụwarị 2021
Smart Arịa Ndewo osisi mepụtara ahịrị eji arụ ọrụ dị n'èzí nwere ọrụ mara mma maka oghere obodo. N’egosiputa udiri ihe eji eme ulo, ha haziri itinye anya ha n’ime ya ma mekwaa ha oru, na-egosiputa ihe oku na ebe ndi USB, nke choro ijikota ogwugwu na batrị. Agwo ahu bu ihe eji ekwu aru; ihe ndị ahụ na-agbanwe agbanwe iji dabara na saịtị ahụ enyere. Fluid Cube bụ otu ahọpụtara nke nwere iko dị elu nke na-egosipụta sel sel. Iolọ studio ahụ kwenyere na ebumnuche ekike a bụ ime ka isiokwu nke iji ụbọchị niile bụrụ ihe ndị a na-atọ ụtọ.
Tebụl Iri Nri
Wenezdee 10 Febrụwarị 2021
Tebụl Iri Nri Ndị Augusta na-akọwagharị tebụl iri nri ochie. Na-anọchite anya ọgbọ dị n'ihu anyị, okike yiri ka o si eto na-adịghị ahụ anya. Ogwe ụkwụ tebụl ahụ na-agbakwasị ụkwụ na ntọala a, na-agbago aka ijide tebụl ibe akwụkwọ. A họrọ osisi ukpa siri ike na Europe maka ihe amamihe ya na uto ya pụtara. A na-eji osisi na-atụfu osisi site n'aka ndị na-arụ ụlọ maka ihe ịma aka ya ịrụ ọrụ. Isi, mkpọka, ifufe na-ama jijiji na swirls pụrụ iche na-akọ akụkọ ndụ osisi ahụ. Enessdi iche nke osisi na-enye ohere akụkọ a ka o biri na mpempe nke ihe nzụkọ ezinụlọ.
calendar 2013 “Farm” Kalenda Satọdee 27 Febrụwarị
calendar 2013 “Safari” Kalenda Fraịdee 26 Febrụwarị
good morning original calendar 2012 “Farm” Kalenda Tọọzdee 25 Febrụwarị
Ntinye Ọkụ Ambient Ọkụ Ọkụ Ọrụ Ebe A Na-Arụ Ọrụ Smart Arịa Tebụl Iri Nri